Option Austria | mamorona hoavy tsara kokoa
Eo ambany fahefan'ny herinaratra - any amin'ny toeran'ny fanjifana herinaratra any Aotrisy
Fa maninona no Superfood & Sakafo ara-tsakafo?
Tanan-tanana faharoa ho an'ny Krismasy
"Ny asako dia ny fahazoana rano ho an'ny fianakaviako isan'andro.
Misy voina ve eo amin'ny tontolo iainana? ...
OPUS - "anio hariva ao amin'ny Opera 2019"
Rene Benko, mpikarama an'arivony maro no nanasa ary ireo elanelin'i Aotrisy tamin'ny politika, media, ekonomika ...
Ny tontolon'i Antenne sy ny fianakaviany dia efa niova. Manana k ...
Ny mpamatsy vola anay indrindra
Alimanaka Advent Alternative
***Rezept-Tipp***. Apropos Kaffee – kennt ihr schon unser Kaffee-Rezeptheft? Dieses Heft enthält neben Hintergrundinformationen zu Kaffee interessante Rezepte für Gerichte, die sich mit fair gehandelten […] more
in Vaovao avy amin'ny orinasa maharitra
COMP🏼 KOMPETISY 💇🏽🌱🌍 Te hanao zavatra tsara ho an'ny tenanao sy ny volonao ianao? Avy eo ataovy [...] more
Azonao an-tsaina ve ny mizara ny rano ao an-tranonao amin'ny olona 6.000? ...
Azonao an-tsaina ve ny mizara ny rano ao an-tranonao amin'ny olona 6.000? Ho an'ny olona ao amin'ny distrikan'i Falo ao Jeldu no tena zava-misy. [...] more
Tena mahasambatra anao ny legioma. Ny zandriny roa amin'ilay mpamboly modely eto amintsika ...
Tena mahasambatra anao ny legioma. Ny zandriny roa amin'ny asanay mpamboly modely Asmara dia mazava ho azy fa mankafy ny chardan'i Swiss vaovao. Faly izy manoloana ny fanovana eo amin'ny menio ary [...] more
Fiarovana vorona: ny fomba hanomezana trano ny vorona
Tsy ny lolo sy ny tantely ihany, na ny vorona 🐦 aza dia manana trano fonenana sy kely kokoa. Ahoana no fomba hanomezan-dry zareo trano azy mandritra ny taona [...] more
Tapaka ny ankamantatra ny alahady. Fa kosa, mila olona ho anao izahay ...
Tapaka ny ankamantatra ny alahady. Fa kosa, te hanao fanamby anao amin'ny maha-olombelona izahay. 😉 Amin'ny herinandro ho avy dia ampahafantarinay ny tenanay sy ianao isaky ny alahady kely [...] more
Ary ny tontolon'ny Fanayse dia hiova amin'ny hoavy ho tsara kokoa. Manana e ...
Ary ny tontolon'ny Fanayse dia hiova amin'ny hoavy ho tsara kokoa. Nandray anjara tamin'ny iray amin'ireo fiofananay momba ny fanaovana volo izahay, izay manome vola be izy io [...] more
Fandokoana fandokoana tsy misy loko »HAIRMONIE fananganana volo voajanahary
#Reading saran-kevitra 🤩📚 Fandokoana ny volonao tsy misy volo - mety ve izany? Miaraka aminay! Manana volo mika sy maina ve ianao? Avy eo, andramo Henna: Izy io hanala ny [...] more
Ny sakafo hariva efa niomanana? Izahay dia manome sôkôla-mena mamelombelona ...
Ny sakafo hariva efa niomanana? Izahay dia manolotra lasopy voanio-mamelombelona! Ho an'ny olona 4 izay ilainao: - ny akora 1 an'ny cilantro, voapetaka - kapoakan'ny Organic Fairtrade 1, nofongarina [...] more
Asehoy fa tezitra ianao - ao amin'ny sarin'ny mombamomba anao koa! ...
Asehoy fa tezitra ianao - ao amin'ny sarin'ny mombamomba anao ihany koa! 😠 Namolavola famolavolana sary mombamomba antsika izahay, mba hahafahanao mampiasa izany amin'ny hetsika ataonay [...] more
Androany dia maniry hanao veloma anao izahay miaraka amin'ny teny faneva ho an'ny faran'ny herinandro hoe ...
Androany izahay dia maniry hanao veloma anao amin'ny teny iray izay mampahatsiahy zavatra manan-danja iray: fa ny olombelona tsirairay dia afaka mandray anjara amin'ny fananganana an'izao tontolo izao [...] more
Tanàna etiopiana iray no manova an'izao tontolo izao - tongasoa amin'i Didiksa - miaraka amin'ny video
Menschen für Ny menchen dia manondro ny lanjan'ny maha-olombelona sy ny firaisan-kina. Ny olona foana no ifantohana. Ny tsirairay amin'izy ireo sy ny tsirairay. [...] more
Ny vahoaka ao an-tanànan 'Didiksa dia miroso amin'ny fampandrosoana ny ...
Ny olona ao an-tanànan'i Didiksa dia nanaiky ny hampivoatra ao amin'ny faritra misy azy ireo. Notantarainay ny tantaran'izy ireo sy ny fomba iarahanay miasa [...] more
Tadidinao ve i Birye ilay tovovavy avy amin'ny gazetiben'i Nagaya? Ianao no ...
Tadidinao ve i Birye ilay tovovavy avy amin'ny gazetiben'i Nagaya? Manana goiter lehibe izy ary efa mandeha. Manana azy ireo isika anio [...] more
Tsenam-potoana: inona no dikan'ny fotoam-potoana?
Ianao ve dia mifantoka amin'ny fizaram-potoana rehefa miantsena? ☀️ Efa miha-efa fohy ny andro ary tsy afaka mitombo intsony any an-tsaha ny Paradeiser. 🍅 vanim-potoana ho an'ny [...] more
Miverina any Etiopia izahay ary anio dia manana fananganana manokana ...
Miverina any Etiopia izahay izao ary nitsidika toeram-pananganana manokana manokana miaraka amin'i manager Gebeyehu. Vetivety foana dia ny fandroam-bahoaka faharoa 💦 [...] more
in Alternatives & Opinions
Ny vokatra momba ny fahadiovana ny vehivavy, mampihena hetra sy haino aman-jery midadasika
2 nizara1 fanehoan-kevitra9 Votes
Tokony handoa hetra ve ny vokatra momba ny fahadiovana ny vehivavy? Fanontaniana mirehitra any Aotrisy, izay mazava ho azy ihany koa aorian'ny fampitam-baovao. Ambonin'ny zava-drehetra, ny ORF dia nitondra tatitra [...] more
Izahay dia mpandrafitra volo voajanahary miaraka amin'ny faharesen-dahatra feno - ary efa nanao izany nanomboka tamin'ny 30 J ...
Mpisolo volo voajanahary izahay miaraka amin'ny faharesen-dahatra feno - ary efa nanao izany nandritra ny taona 30 taona maro be more
Izay no 2019 fair mpitsidika! Faly izahay tamin'ny fitsidihan'ny ...
Izay no 2019 fair mpitsidika! Faly izahay tamin'ny fitsidihan'ny Tekle Tadesse Gelgele, mpamboly kafe FAIRTRADE avy any Etiopia sy ireo marobe [...] more
Aza adino: Ampiasao ny mety ho demokratikao ary sonia ny K ...
Aza adino: Mampiasà ny demokratika azonao atao ary sonia ny fangatahana ny fiovan'ny toetr'andro! Wir #wirsindsauer #notmyklimaplan #climateprogram ankehitriny Loharano more
Androany, talohan'ny taona 38, i Karlheinz Böhm dia nanangana ny fandaminana Menschen für Mensch ...
Androany, talohan'ny 38 taona lasa izay, i Karlheinz Böhm dia nanangana ny fandaminana Menschen für Menschen ary avy eo nametraka ny fototra ho an'ny "fanampiana ho an'ny tena" ho an'ny tapitrisa an-tapitrisany. more
Tena tezitra izahay satria tsy misy fepetra noraisina hanoherana ny krizy.
Tena tezitra izahay satria tsy misy fepetra noraisina hanoherana ny krizy! 😠 Tezitra ve ianao? Dia asehoy izany! Makà sary iray [...] more
Isan'andro dia afaka manao "andro tsara volo". Satria manome #Haargel an'i Herbanima ...
Isan'andro dia afaka manao "andro tsara volo". 😉 Satria manome hazavana ny #Haargel an'i Herbanima, ary koa miondrika sy mamaritra ny curl. Mpanampy mahomby ho an'ny [...] more
Mahafantatra tsara ny FAIRTRADE ianao ary maniry ny hafanam-po amin'ny hevitra tsara kokoa ...
Mahafantatra tsara ny FAIRTRADE ianao ary maniry ny hanaitra ny hafanam-po amin'ny hevitra hisy tontolo tsara kokoa? Avy eo marina ianao miaraka aminay - ampiharo [...] more
Maniry anao ho tsara manomboka amin'ny herinandro ...
Maniry anao ny fiandohana mahafinaritra amin'ny herinandro ☕🍌 Loharano more
Ny magazine Attac 2019 / 2 dia mafana noho ny gazety an-tsokosoko ao amin'ny mailaka an'ny mpikambana ary ...
Ny magazine Attac 2019 / 2 dia vaovao avy amin'ny gazety an-tsokosoko amin'ireo boaty an'ny mpikambana sy mpamatsy vola antsika. Anisan'ireo zavatra hafa miaraka amin'ny lohahevitra: #Klimagerechtigkeit, #Mercosur, #Konzerne ary #Treuergerechtigkeit ary koa ny toekarena #Transform ary [...] more
Amin'izao andro manerantany siansa izao ho an'ny fandriampahalemana sy fampandrosoana, te-hamindra izahay ...
Amin'izao andro maneran-tany momba ny siansa ho an'ny fandriam-pahalemana izao dia te-hihaino anao izahay: firy ny mpianatra efa nahavita ny iray amin'ireo diplaoma teknika teknika telo tao amin'ny Electrical Engineering [...] more
Avy amin'ny fomba fiaina mahasalama, tsy ny vatanao ihany no mahasoa, fa koa ny ...
Avy amin'ny fomba fiaina mahasalama, tsy ny vatanao ihany no mahasoa, fa ny volonao koa. 🏃♀️ Indrindra amin'ny andro mangatsiaka, tokony ianao: ► manana rano ampy [...] more
#wirsindsauer - miaraka amin'ny sary mihetsika
#Manahy be izahay satria ny politika Australiana dia tsy manome fandaharam-potoana mazava momba ny fiatrehana ny krizy! 😠 #NotMyKlimaplan mitovy ianao? Arotsaho avy eo ny sarinao, [...] more
Rehefa miha-fohy ny andro ary mihamafana ny andro, maro no mijaly ...
Mampalahelo fa rehefa mihamafana ny andro ary mihamafana ny andro, manomboka ny hatsiaka ho an'ny maro amintsika - indrisy, tao amin'ny biraonay ihany koa, tratra izahay [...] more
3. Forum "Ny vola tsara - mampiasam-bola miaraka amin'ny sanda miampy"
ny Foiben'ny tontolo iainana Raiffeisenbank Gunskirchen
Miverina rehefa manao zavatra ho an'ny tontolo iainana na fiaraha-monina tsaratsara kokoa? Mety hitranga ve izany? Eny, hoy ny manam-pahaizana momba ny 3. [...] more
Öko-Test dia mampitandrina amin'ny fanafody carcinogen sy hormonina amin'ny vokatra fikarakarana molotra
Mahagaga ny tena: mampitandrina ny bizina fanta-daza ny eco-test. Afaka manome toky anao izahay: ny gratis LIP CARE dia maimaimpoana amin'ny menaka mineraly sy ny akora manimba hafa. IANAO ihany no mety [...] more
Akory ny endriny Tekle Tadesse Gelgele, mpamboatra an-trano kafe ao amin'ny Ortôbrajan'ny Mpamboly kafe Oromia ...
Mahafinaritra tokoa 😍 Tekle Tadesse Gelgele, mpamboly kafe ny Oromia Coffee Farm Cooperative Union avy any Etiopia dia mitsidika anay any Aotrisy ary miresaka momba ny zava-niainany […] more
Tamin'ny herinandro lasa, Dominik Linhard, manampahaizana dia nanome seminera momba ny mahasoa amin'ny ...
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanao ny seminera momba ireo zavamaniry mahasoa ao amin'ny toeram-piompiana ao Agril City i Dominik Linhard. 🦋 Misaotra an'ireo tia ny natiora rehetra izay tao! [...] more
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara ny orinasa angovo Vattenfall sy RWE fa ...
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara ny orinasan'ny angovo Vattenfall sy RWE fa izy ireo koa dia te hanenjika an'i Holandy! Ny antony mahatonga an'io dia lalàna iray hialana amin'ny [...] more
Summer fahavaratra. Ny fararano miaraka amin'ny lokony rehetra no vanim-potoana tonga lafatra ho an'ny ...
Fararano India. 🍂🍁 Ny fararano miaraka amin'ny lokony dia vanim-potoana tonga lafatra ho an'ny fanovana kely. Fantatrao ve ny loko #akan'i Herbanima? Izy ireo [...] more
Ny kafe dia fisotroana malaza any Aotrisy misy 186 litatra isaky ny kapita sy taona! ...
Ny kafe dia fisotroana malaza any Aotrisy per kapita isan-taona amin'ny 186 liter! Any Alemaina, ny fisotroana kafe miaraka amin'ny 163 liter dia na dia [...] more
Ny rivotra lavo eny amin'ny rivotra .. ary amin'ny volo. Tianay ny fahalavoana. Ary ambonin'izay rehetra malala ...
Ny rivotra lavo eny amin'ny rivotra .. ary amin'ny volo. Tianay ny fahalavoana. Ary ambonin'izany rehetra izany, tianay ny loko mahafinaritra izay [izy] more
Biriye dia iray amin'ireo vehivavy mahavariana izay fantatsika tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Biriye dia iray amin'ireo vehivavy mahavariana nifanena taminay tato anatin'ny taona vitsivitsy izay. Mipetraka amin'ny renibeny sy ny rahavaviny amin'ny farany [...] more
E-fiara mampiroborobo ny fifamoivoizana tsirairay
Ny tarehimarika avy any Norvezy dia mampiseho fironana tena tsy dia mahafaly: Taorian'ny nividianany e-car, toa tsy faly be loatra ireo mpamaly ireo [...] more
Miakatra ny toetrandro sa sa mifamadika isika?
#wirsindsauer! 😡 Ny drafitry ny angovo sy ny toetrandro (NAPP) naseho androany dia tokony hasehontsika antsika ny lalan'ny krizy, fa mahamenatra ilay volavola! ... [...] more
Lohazo | Seminera Natur-Kosmetik ho an'ny mpanao volo voajanahary | CULUMNATURA makiazy voajanahary
Ho an'ny module #head massage avy amin'ny 7. mandra-9.12.2019 dia mbola misy toerana sisa! Loha lavitra noho ny fanao "side effects" mandritra ny fitsidiham-bolo ny lamosim-bolo. Iza [...] more
mpampiasa anarana tenimiafina
Zava-misy sy hetsika
Ny Grätzloasen any Vienna dia mankalaza ny PARK (amin'ny) Andro 2019
Fandefasana Grätzloasen ho an'ny 2020
in Initiatives sy fangatahana, Aotrisy
Hazo hazo adé!
NaDiVeG dia mifanentana amin'ny soa iombonana
ny Silvia Painer
in Initiatives sy fangatahana, Aotrisy, Sivily sivily & ONG
Fangatahana sy firosoana tany Aotrisy
in Initiatives sy fangatahana, Aotrisy, Videos
# ZavamaniryFiry hazo. Ataovy fotsiny. Arovy ny toetr'andro.
2040 - Mamonjy an'izao tontolo izao izahay! - Mpandeha (german / german; FSK 0)